Tawakkalna Apk Download Ho an'ny Android [Nohavaozina 2022] - Luso Gamer
Tawakkalna Apk Download ho an'ny Android [Nohavaozina 2022]
Aprily 6, 2022 Janoary 21, 2022 by John Smith
Satria ny Fanjakana Saudi Arabia dia malaza amin'ny toerana fizahan-tany mahafinaritra. Saingy noho ny fitomboan'ny fizahan-tany ataon'ny mpizahatany ao anatin'ny KSA dia niharatsy hatrany ny aretina. Noho izany mifantoka amin'ny fiarovana ny vahoaka sy ny fizahan-tany dia nanangana App vaovao dia ny Tawakkalna Apk.
Noho izany tamin'ny fiandohan'ny taona 2020, aretina mahafaty vaovao nisaraka nanerana ny Globe. Izay tsy vitan'ny manimba ny firenena an-dalam-pandrosoana. Saingy miteraka krizy ara-toekarena goavambe ao anatin'ny firenena mandroso toa an'i Saudi Arabia ihany koa izany.
Na dia tamin'ny voalohany aza, ny firenena dia nahomby tamin'ny fanoherana ny toe-javatra nahavoafaty nametraka lalàna sy fifehezana matanjaka. Fa rehefa dinihina ny krizy amin'ny taona vaovao sy ny krizy ara-toekarena. Ny KSA dia nanokatra ny fetrany ho an'ny olona rehetra manerantany.
Tahaka ny alin'ny Taom-baovao dia tsy misy mieritreritra ny areti-mifindra sy ny firongatry ny tranga. Saingy vao tsy ela akory izay rehefa niatrika ny krizy areti-mandringana indray ny firenena. Nanapa-kevitra ny hametraka hidin-trano mahery vaika indray izy ireo ao amin'ny firenena.
Ankoatr'izay, ny firenena dia mametraka fameperana mafy amin'ny fandehanana sy ny fitsidihana any ivelany. Noho ny fitomboan'ny tranga fa tsy ny fanaovana vaksiny ny olona. Namoaka ity vaovao ity ny sampana misahana ny fahasalamana App momba ny areti-mifindra.
Amin'ny alalàn'ny manam-pahefana dia afaka manara-maso sy manara-maso matetika ireo olona voakasik'izany. Ankoatr'izay rehefa dinihintsika lalina ilay fampiharana. Avy eo dia hitanay ny isan'ny safidy vaovao samy hafa izay mahatonga azy io ho mora hatonina kokoa.
Toy ny GPS miasa miaraka amin'ny safidy manasongadina tonga lafatra. Midika raha misy olona mararin'ny tsimok'aretina ary izy no mety mahatonga ny fisarahana. Ny GPS dia hahafahan'ny olona akaiky hahazo fanairana farany momba ireo olona voan'io. Ka raha te hisoroka ny tenanao amin'ny areti-mifindra ianao fa tsy mametraka ny Tawakkalna App.
Bebe kokoa momba ny Tawakkalna Apk
Noho izany ny fampiharana dia loharanom-baovao tonga lafatra amin'ny Internet momba ny toe-javatra Pandemika. Plus dia hanome torolàlana feno ihany koa izy hanavotana ny tenanao sy ny hafa tsy ho voakasik'izany. Mba hahamarina sy fampahalalana bebe kokoa azy, nampidirin'ireo mpandrindra ity GPS ity.
Amin'ny alàlan'ny GPS, avela hifampiresaka sy hanara-maso ny toe-javatra ny sampana miahiahy. Ankoatr'izay, ny safidy manokana dia hahafahan'ny mpampiasa voasoratra anarana hiditra amin'ny rafitry ny sarintany. Amin'ny fitadiavana ireo tranga traboina eo akaiky eo.
Developer Ivon-toerana fampahalalam-baovao
Anaran'ny fonosana sa.gov.nic.tawakkalna
Android takiana 6.0 ary Plus
Noho izany dia afaka mandray fepetra manamafy izy ireo hialana sy hivezivezena milamina. Raha ohatra ka napetraka ao anatin'ny tanàna ny tsy fahazoana mivezivezy dia ahoana no ahafahan'ny olona voany mitsidika ny hopitaly. Amin'izany tranga izany, ny Tawakkalna Apk dia hanampy an'io olona io amin'ny fifandraisana.
Plus io koa dia hitarika ilay olona voakasik'izany hahazo vaovao marina momba ny toe-javatra ivelany. Ireo no teratany KSA dia afaka misoratra anarana amin'ny App amin'ny alàlan'ny laharan-karapanondron'izy ireo. Ireo izay vahiny na vahiny dia afaka misoratra anarana amin'ny alàlan'ny nomeraony pasipaoro.
Ilaina koa ny nomeraon-telefaona ho fanamarinana ilay olona manokana. Raha KSA ny toerana misy anao ankehitriny ary tafahitsoka amin'ny krizy pandemika. Avy eo izahay dia manoro hevitra anao hametraka App Tawakkalna COVID. Izay azo sintonina avy amin'ity pejy ity.
Ny kinova am-boalohany ny fampiharana dia azo alefa eto.
Ny fametrahana ny App dia hanolotra fampahalalana marina sy marina.
Mikasika ireo krizy aretin-tratra ankehitriny.
Hanolotra rafi-tsarintany mivantana ihany koa izy io.
Izay hahafahan'ny olona akaiky mahita ny toerana tena misy azy.
Azon'izy ireo atao koa ny tsy mitsidika ny toerana akaiky.
Mba hiarovan-tena amin'ny krizy toy izany.
Ilaina ny fisoratana anarana raha te hiditra amin'ny tontonana admin.
Ho fisoratana anarana dia takiana ny laharan'ny kara-panondron'olona.
Raha vahiny ianao dia azonao atao ny misoratra anarana amin'ny isa Passport.
Ilaina ny laharana finday raha te hahazo mari-pahaizana marina.
Ahoana ny fampidinana ny Apk
Na dia mora hatonina ao anaty Play Store aza ilay fampiharana. Saingy noho ny antony teknika samihafa dia maro ny mpampiasa no tsy afaka miditra mivantana amin'ilay rindranasa. Noho izany mifantoka amin'ny fanampian'ny mpampiasa dia manolotra ny kinova voalohany ihany koa izahay.
Mba hahazoana antoka ny filaminan'ny mpampiasa. Ny ekipa manam-pahaizana dia mametraka an'io rakitra io hatrany amin'ny fitaovana samihafa. Ka tsy hahatsiaro matahotra mihitsy ilay mpampiasa raha misintona. Raha te-hisintona ny kinova farany an'ny Tawakkalna Android dia tsindrio ny rohy eto ambany.
Azonao atao koa ny misintona
Doka no mahazo ny App
Ny tontolo iray manontolo dia eo ambanin'ny mode shutdown ao anatin'izany ny KSA. Raha manahy momba ny toe-javatra ankehitriny ianao ary vonona ny hisoroka ny voka-dratsy. Avy eo izahay dia manoro hevitra anao hametraka ny Tawakkalna Download avy eto amin'ny safidy iray tsindry iray.
Sokajy Apps, Fahasalamana & Fitness Tags App momba ny areti-mifindra, Ampidiro ny Android, Tawakkalna Apk, Tawakkalna App, Tawakkalna COVID App, Tawakkalna Download Post Fikarohana
Rhythm Hive Apk Download ho an'ny Android [Vaovao farany 2022]
DU Tv Live Apk Download Ho an'ny Android [Vaovao 2022]